Wiilka Qadafi oo soo hadley, mucaaradka oo waqti u qabtey Sirta & wararkii u dambeeyey – SBC
Wiilka Qadafi oo soo hadley, mucaaradka oo waqti u qabtey Sirta & wararkii u dambeeyey
Wiilka uu dhaley hogaamiyaha baxsadka ah ee wadanka Liibiya Muammar Al-Qaddafi ayaa sheegay in ay dagaalami doonaan ilaa dhimashada, isagoo sheegay in Aabihiis uu kula sugan yahay magaalada Tripoli ee caasimada Liibiya.
Saif al-Islam Gaddafi wuxuu sheegay in Aabihiis uu bad qabo oo aanu waxba ku noqon dagaalada waxaana uu sheegay in uu ku sugan yahay duleedka magaalada Tripoli.
“Iska caabintu way socon doontaa waxaana soo dhaw guusha” ayuu ku yiri fariin maqal ah oo uu soo duubay Saif Al-Islam oo laga baahiyey Telefsihinka Al-Rai ee dalka Liibiya.
Taageerayaasha Qadaafi oo ilaa maanta haysta inay hubka dhigaan
Laakiin hogaamiyeyaasha KMG ah ee Liibiya waxay sheegeen inaanay qorsheyneyn inay wax wadaxaajood ah la galaan kooxaha daacada u ah Col. Qadaafi, iyagoo sheegay inay hubka dhigaan ugu dambeyn maanta oo sabti ah, hadii kale ay dagaal wajihi doonaan.
Taliyeyaasha ku kacsan Qaddafi waxay sheegeen inay u dhaqaaqayaan wixii xiligan ka dambeeya xaga magaalada Sirta oo ah halka uu ku dhashay Col. Qadaafi isla markaana ah goobta ugu badan ee uu ku leeyahay taageerayaal daacad u ah oo doonaya inay u dagaalamaan.
Saif al-Islam wuxuu ka digay dagaal caynkaasi ah oo lagu qaadon magaalada Sirta wuuxuna ku nuuxnuuxsadey in ay magaalada ku sugan yihiin 20 kun oo dad hubaysan kuwaasi oo diyaar u ah inay daafacaan Sirta.
Wararkan waxay ku soo aadayaan iyadoo ay soo baxayaan in xoogaga mucaaradka ay gacanta ku dhigeen wasiirkii arimaha dibada ee Col. Qadaafi Abdelati Obeidi.
Wakaalada wararka Reuters waxay sheegtey Mr Obeidi laga qabtey isagoo ku sugan beer uu ku leeyahay deegaanka Janzour oo ku dhaw magaalada Tripoli.
Col. Qadaafi oo la la’yahay meel uu jaan & cirib dhigay
Hogaamiyihii 42 sano xukumayey Liibiya Col. Qadaafi ayaa la la’yahay meel uu jaan & cirib dhigay waxaana maalinimadii Isniinta la xaqiijiyey in sadex imood oo uu dhalay & xaaskiisa ay ka talaabeen xadka Liibiya & Al-Jeeriya iyagoo magangalyo ka helay xukuumada Al-Jeeriya.
“Waxaan jeclahay inan dadka u xaqiijiyo in aynu ku socono si xawli ah, isla markaana hogaamiyuhu uu fiican yahay, waxaan ku soo socdey wadooyinka caasimada arbcadii” ayuu ku yiri hadalkiisa Saif Al-Islam.
“Si dhakhso ah ayaan ku imaan donna fagaaraha cagaaran hadii ALLE idmo” ayuu hadalkiisa ku yiri wiilka Col. Qadaafi.
“Waa inaynu qaadnaa talaabooyin olole ah oo aynu habeen & maalin wadno, ilaa aan dhulkan ka nadiifimo tuugada & canaasiirta” ayuu ku si darey warkiisa Saif.
Wiilasha Col. Qadaafi oo hadalo isburinaya laga soo xiganayo
Laakiin Saadi Gaddafi oo fariin gaarsiiyey telefishinka al Arabiya wuxuu sheegay in uu ka helay xiriir golaha qaranka KMG taliyaha u qaabilsan Tripoli isagoo sheegay in uu wadaxaajood uu Aabihiis u fasaxay uu la galayo saraakiisha kooxaha kacdoonka wada.
“Hadii inaan isdhiibyo ay joojinayo dhiiga daadanaya waxaan diyaar u ahay inaan caawa isdhiibo” ayuu yiri Saadi Qadaafi.
Taliska Ciidanka kacdoonka oo xaqiijiyey xiriirka wiilka qadaafi
Abdul Hakim Belhadj, oo ah taliyaha guud ee ciidamada golaha qaranka KMG ah ee Tripoli wuxuu xaqiijiyey in uu xiriir la hadley Saadi Qadaafi.
“Wuu isoo wacayn, wuxuuna ii sheegay dareenkiisa ku aadan in uu ku soo biirayo mucaaradka” ayuu yiri Abdul Hakim oo u waramayey wakaalada wararka Reuters.
Abdul Hakim wuxuu kaloo ka hadley wixii uu ku yiri Saadi “Waxaynu u sheegney saadi inaynu u damaanad qaadi doonno hab dhaqan wanaagsan oo ku saleysan xuquuqda aadamaha, sharciyada xuquuqeed ee uu leeyahay qof kasta oo Liibiyaan ah”.
60 wadan oo u shiraya taageerada Liibiya.
Hogaamiyeyaasha 60 wadan oo ay ka mid yihiin Ra’isalwasaaraha UK David Cameron,Madaxweynaha Faransiiska Nicolas Sarkozy, xoghayaha amuuraha dibada Mareykanka Hillary Clinton, xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon & kuwa kale ayaa ka qayb galaya shir caalami ah oo ku aadan taageerada Liibiya.
Kooxdan oo la magac baxdey “Saaxiibada Liibiya” waxay ku kulmayaan magaalada Paris ee caasimada Faransiiska, iyadoo sidoo kale shirkaasi ay ka qayb galayaan ururo caalami ah.
Ruushka oo aqoonsadey Golaha Qaranka KMG Liibiya.
Xukuumada Moscow ayaa ugu dambeyn golaha qaranka KMG Liibiya waxay u aqoonsatey awooda xukuumadeed ee matasha Liibiya.
Shiinuhu wuxuu sheegay in uu madaxweyne kuxigeenkiisa u dirayo shirka Paris.
Golaha qaranka KMG Liibiya waxay sheegeen inay filayaan in loo fasaxo malaayiin doolar oo ay xanibeen dowlaha ka soo horjeeday hogaaminta Qadaafi.
Mareykanka & Ingiriisku waxay ka qaadeen xayiraadii 3.1 bilyan oo doolar oo horey ay u saareen xayiraad.
Maalinimadii Arbcada waxaa dalka Liibiya loo duuliyey 280 milyan oo Diinaarka Liibiya oo u dhiganta 210 milyan oo dollar oo horey u qabtey dawlada Ingiriiska waxaana qorshahaasi uu qayb ka yahay balaayiin doolar oo loo gudbin doono bangiga dhexe ee Liibiya.
Hadalka ka soo baxay Saif al-Islam wuxuu meesha ka saarayaa wararkii isa soo tarayey oo ku aadanaa in wiil uu dhaley Qadaafi oo lagu magacaabo Saadi oo sheegay Arbacadii shaley in uu wadaxajood dagaalka lagu soo afjarayo uu la galayo xukuumada KMG ee Liibiya.